एसईई परीक्षा स्थगित, काभ्रेबाट कति सामेल हुदैँ थिए ? « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
धुलिखेल, ५ फागनु : सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गरेको छ । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
एसईई परीक्षा चैत ६ गतेदेखि तोकिएको थियो । यसअघि सरकारले एसईई परीक्षा नरोक्ने तर सबै परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
एसईई परीक्षामा यो वर्षको काभ्रे जिल्लाबाट नियमित तर्फ ७ हजार दुई सय चालिस जना विद्यार्थी सहभागि हुदैँ थिए । आंशिकतर्फ भने जम्मा ३५ जना मात्रै विद्यार्थी रहेको शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई काभ्रेका प्रमुख गोकर्ण ध्वज कार्कीले जानकारी दिए । नियमित र आंशिकका गरी सात हजार दुई सय ७५ विद्यार्थीका लागि ४० वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको थियो ।